» थाइराइड तपाइलाई पनि छ कि ? यसरी पत्ता लगाउनुस
थाइराइड तपाइलाई पनि छ कि ? यसरी पत्ता लगाउनुस
११ जेष्ठ २०७६, शनिबार १०:२६
मैले अघि पनि भनिसके, यो शरीरलाई तागत दिने हर्मोन हो । शरीरमा हर्मोन कमी भयो भने हाइपोथाइराइडिजम भएमा खासै त्यस्तो जटिल समस्या त आउँदैन तर असर गरिराख्छ । जस्तै स् काम गर्न अल्छि लाग्ने , निन्द्रा बढी लाग्ने , थकाई लाग्ने हातखुटा गल्ने कपाल झर्ने आदि ।
थाइराइडको समस्या जुनसुकै उमेरमा देखिनसक्छ । तर हाइपटरथाइराइडिजम बढी जसो यस्तो समस्या १९ – २० बर्षका किशोर किशोरीमा देखापर्छ । हाइपोथाइराइजिम प्रौड महिलाहरुमा बढी देखापर्छ । अर्थात ४०९ ५० बर्ष पुगेपछि यस्तो समस्या देखिन सक्छ ।
यो थाइराइडको लक्षणहरु अलि बृहत हुनसक्छ । तर पनि एउटा दुईटा लक्षणहरु हेरेर स्क्रिनिङ गर्ने गरिन्छ । जस्तै स् गर्भवती हुनुहुन्छ वा हुन लाग्नु भएको छ भने थाइराइडको परीक्षण गरेको राम्रो । मधुमेह, तथा बाथको समस्या छ भने पनि एक पटक थाइराइड जचाँए राम्रो ।
र, थाइराइडबारे यस्ता खाले भ्रम पनि छन थाइराइड बारे हाम्रो समाजमा विभिन्न खालका भ्रमहरु पनि छन् । जस्तै थाइराइडलाई एकदमै डरलाग्दो रोग हो, थाइराइड भएमा निसन्तान हुन्छ आदि आदि । तर बास्तविकता के हो भने यो दुईवटै कुरा सत्य होइन । अर्थात थाइराइड नियन्त्रणमा आयो भने त्यो समस्या आफसेआफ हराएर जान्छ ।